Ka Ganacso Forex, badeecadaha (Commodities), Indices iyo CFDs
Goobta ugu Ammaansan ee lagu Ganacsado
Oo ku Hadla luuqado dhawr ah, Shaqsiyeed
Helitaanka Boggag waxbarasho
Shirkaddu waxay adeegsataa servers ku xidhan cloud oo leh isku xirnaan aad u wanaagsan adduunka oo dhan kuna lamaan tahay gelida suuqa ugu dhaqsaha badan, spreads aad u hooseyso iyo dib u dhaca ugu yar si loo xakameeyo khtarta khasaraaha aan loo baahnayn.
Softwares cusub oo horumarsan kana hortagaya jabsashada, kana ilaalinaya xogta macmiilka weerarada cyberka.
Amaanka ayaa ah udub dhaxaadka ugu muhiimsan dhamaan hawlahayaga oo idil.
FXPRIMUS waa shirkadii dilaal ee ugu horreysey bilawga talaabooyinka dheeriga ah ee ka hortagga, waxayna ballanqaadeysaa inay sii horkacdo amaanka shirkadaha forex, iyadoo u maraysa cilmi baadhista tiknoolajiyada cusub oo ay sii weheliso ka hortagga khataraha baaxada weyn ee macaamiisha oo loo marayo waxbarashada.
Waxaan ku hirgalina nidaamyo adag dhamaan badeecooyinka iyo adeegyada aanu bixino si aan u hubinno in macaamishayadu aanay gaarin NBP (ka hortagga in akoonku noqdo negative ama 0).
Nidaamkayga guud ee waxbarashada ayaa laga dheehan karaa bixinta aasaasiga ah ee bilawga ganacsiga, maadaama aan aaminsanahay in ganacsatada guuleysta la siiyo taageerada ugu wanaagsan ee waxbarasho ahaan suurtagalka ah inta ay ku gudo jiraan hayaankooda ganacsi.
Ganacsatada aqoonta leh ayaa ku qalabaysan qalabyada ka caawinaya gaarida go'aamada cilmiyaysan oo leh tayo wanaagsan iyo waqti dheer - waayo aragnimo ganacsi.
Qaab cusub oo taxliilinta aasaasiga iyo farsamo ay kuu siinayaan khubarada ku talaxtagtay ee shirkada iyadoo la adeegsanayo cilmi baaris iyo hababka ganacsiga ee cusub.